Hot Run 3D Apk Dhawunirodha Ye Android [Gameplay] - Luso Gamer
Hot Run 3D Apk Dhawunirodha Ye Android [Gameplay]
April 13, 2022 by John Smith
Isu takatopa akawanda akasiyana e2D chiito mitambo iri nyore kutamba. Uyezve, mitambo yakadai haimbowani nzvimbo yakawanda kana zvasvika pakugadzika nekutamba. Tichitarisa kufarira kwevatambi pano nhasi tadzoka zvakare neHot Run 3D Apk.
Chaizvoizvo, iyo yekutamba application ndeye online chiitiko chikuva. Iko kune vatambi vanoda kutungamira uye famba nevakadzi vakanaka hunhu pamusoro penzira. Pane zvinhu zvakawanda zvinopisa izvo zvinogona kuoneka uchifamba.
Mutambi anoda kuunganidza izvo zvinopisa zvinhu. Vatambi vakawanda vanobudirira kuunganidza zvinhu zvinopisa, nhamba yekuwedzera yevarume ichatevera musikana. Saka iwe wakazvipira kutamba mutambo uye unoda kuti unakirwe iyi yakasarudzika dhizaini wobva waisa Hot Run 3D Dhawunirodha.
Chii chinonzi Hot Run 3D Apk
Hot Run 3D Apk chiitiko chepamhepo chakavakirwa Android gameplay chakagadzirwa netapp_games. Ikozvino kuisa iyo gameplay mukati me smartphone kuchabatsira kunakidzwa nekuongorora machira akavanzika uye chinhu chinopisa munzira. Uyezve, vatambi vanogona kunakidzwa nekuunganidza max mapoinzi.
Kana tikataura nezve iyo 3D Gameplay, saka rakasiyana uye rakasiyana maererano nekutamba. Mitambo yakafanana inopa iyo yakafanana mutambo wemitambo inogona kutadza kupa iyi yakasarudzika pfungwa. Apo musikana akanaka anomhanya pamusoro penzira.
Kunyangwe nzira yekufamba yakapfuma muzvinhu zvinopisa izvo zvinogona kubatsira mukuwedzera tembiricha yemuviri. Kamwe vatambi vakabudirira mukuwedzera tembiricha. Ipapo hunhu hwemusikana huchabvisa machira ake uye kuita sexier.
Nekuda kwechitarisiko chake chinoyevedza, vanhu vanotanga kumhanya vachitevera musikana. Ndichiri kusvika kumagumo, kana vatambi vakabudirira mukukwezva huwandu hwevarume. Ipapo bhonasi nemapoinzi zvichawedzerwa zvinoenderana. Saka wagadzirira kutamba Hot Run 3D Game wobva warodha kubva pano.
zita Hot Run 3D
zera 56.34 MB
Package Zita com.ty.hot
Inodiwa Android 5.1 uye Uyezve
chikamu Games - Action
Munguva yazvino, uko vanhu vanofarira kuongorora mitambo mitsva. Ivo zvakare vanonzwa kuganhurira nekuda kwezviwanikwa zvishoma uye vanogona kusangana nekupikisa kukuru uku nenzira yenzvimbo shoma uye processor. Nekuda kwekushandiswa kwechimbo chekare vanosanganawo nemamwe matambudziko akakosha panguva yekutamba.
Saka tichitarisa dambudziko, vagadziri vacho vakauya nemutambo mutsva uyu. Uko zviwanikwa nenzvimbo inodiwa inochengetwa yakaderera. Izvi zvinoreva kuti, mutambo unongogadzika uye unotamba pane ese mafoni.
Avo vasina kugadzikana nedefault setting. Iye zvino unogona kugadzirisa zviri nyore iwo makiyi marongero uye wozvibata zviri nyore. Kunyangwe kusvika parizvino, hapana kuvandudzwa kwakakosha kunoitwa mukati memutambo. Asi vanogadzira vari kuronga kuwedzera sarudzo nyowani mukati.
Magadzirirwo akakosha akadaro anogona kuwanikwa kushandiswa mumazuva anouya. Saka iwe wakatarisa uye wakagadzirira kunakidzwa nemutambo mutsva uyu neshamwari. Zvino wakamirirei? Ingo dhawunirodha Hot Run 3D Android kubva pano uye unakirwe nekukwezva mhomho.
Iyo yemitambo app ndeyemahara kurodha.
Kuisa mutambo kupa yakasarudzika yekutamba ruzivo.
Izvo zvinosanganisira kuunganidza zvinhu zvinopisa.
Hapana kunyoreswa kunodiwa.
Kusvika parizvino hapana yechitatu bato ads inobvumidzwa.
Iyo gameplay interface yakachengetwa iri nyore.
A simple key setting sarudzo inowedzerwa.
Nzira yekudhawunirodha Hot Run 3D Apk
Parizvino mutambo wemutambo unowanikwa kurodha kubva kuPlay Store. Asi inochengetwa pakati pezvigadzirwa zvinorambidzwa. Izvi zvinoreva kuti madhijitari anokodzera chete anotenderwa kuwana yazvino Apk faira. Saka avo vasingakwanise kuwana yakananga Apk faira.
Inofanirwa kushanyira webhusaiti yedu uye kudhawunirodha ichangoburwa yemitambo application nekudzvanya kumwe chete. Ingobaya pamusoro pekurodha bhatani rekubatanidza uye uwane yakananga yepakutanga Apk faira. Rangarira isu takatoisa iyo HotRun3D mukati memidziyo inowanikwa pasina nyaya.
Iyo yekutamba application yatiri kubata pano ndeye yechitatu bato. Saka isu hatimbove isu copyrights ekushandisa kwemitambo. Nekudaro isu takatoisa iyo gameplay pamusoro pemidziyo yakasiyana uye hatina kuwana dambudziko rakakura.
Kusvika ikozvino mamwe akasiyana 2D uye 3D mitambo yakaburitswa. Kuisa uye kunakidzwa neaya mamwe ehukama ekutamba application ndapota isa anotevera maApk mafaera. Ndivo Army Commander Apk uye Warnet Simulator Apk.
Saka iwe unoda kutamba chiito-based gameplays asi usingakwanise kuwana yakagadzikana. Izvo zviri nyore kuisa uye kuwana zvishoma zviwanikwa pamwe nenzvimbo. Zvino mune izvi, isu tinokurudzira avo vatambi kurodha Hot Run 3D Apk kubva pano.
Categories Action, Games Tags 3D Mutambo, Hot Run 3D Android, Hot Run 3D Apk, Hot Run 3D Download, Hot Run 3D Game Post navigation
Tiger TV Apk Dhawunirodha Ye Android [Yazvino IPTV's]
NRO Blue Apk Dhawunirodha Ye Android [Mutambo Mutsva]